देश मा बस्न सामान्य उपयोगिता कोठा बिना पनि सहज छैन। तपाईं भने आफ्नै हातमा दिन hozblok, तिनीहरूले लागि मात्र होइन banal शेड को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् बगैचा उपकरण र अन्य कुराहरू, तर पनि प्राण। तपाईं आफ्नो मा निर्माण गर्न निर्णय भने, हामी खाता धेरै महत्त्वपूर्ण कारक मा लिनुपर्छ। पहिले, आफ्नो परियोजना प्रयोगमा मात्र छैन सुविधाजनक, तर पनि व्यावहारिक हुनुपर्छ।
यसको निर्माण लागि सामाग्री रूपमा पाँच तारे होटल को बराबर जोखिम अन्यथा hozbloka लागत रूपमा सस्तो हुनुपर्छ। निस्सन्देह, काम छोटो समयमा बाहिर हुनुपर्छ। त्यसैले, आफ्नो हात सबैभन्दा सरल निर्माण परियोजनाहरू छैनन् दिन hozblok।
यो साइटमा सबै भवनहरु dissonance र foreignness एक अर्थमा कारण बिना, यो तमाम नजर मधुर स्वर एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर पनि उल्लेख लायक छ। यी आवश्यकताहरू अनुरूप गर्न काम सुरु जमीन, कागज मा आफ्नो स्केच कुनै न कुनै उपस्थिति र योजना गर्न SHED को बाध्यकारी निर्धारण गर्न पनि अघि रोक्न छैन।
फेरि एक पटक हामी भवन निर्माण सामाग्री को स्मरण गराउन: यो आवश्यक मात्रा गणना गर्न मात्र होइन, तर पनि, हेर्नुहोस् विकल्प को एक वित्तीय बिन्दुबाट सबैभन्दा उपयुक्त छनौट आफ्नो भवन आधार मा सबै अवस्थित मार्जिन भ्रमण गर्न आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, पनि हाम्रो समय उपलब्ध सामाग्री को लागत को सबै छैन किनभने आफ्नै हात दिन hozblok।
उपकरण को तपाईंलाई आवश्यक:
• मार्गदर्शन वा बिजुली hacksaw;
• मार्गदर्शन वा बिजुली planer;
• बिजुली ड्रिल।
काम जग निर्माण सुरु। निस्सन्देह, सुरुवातको लागि कुनै आवश्यकता अखंड slabs, तर पनि धेरै एक खेलौना आधार के हुँदैन: यो सम्भव तपाईं मार्जिन चोट छैन भनेर, आफ्नो SHED विस्तार गर्ने निर्णय छ। लागत कम गर्न ठीक columnar वा ढेर जग हो, तर यो खोक्रो बेल्ट विकल्प अदालत छ। यो संग, तपाईं सस्ती दिन hozblok निर्माण।
यो आधारमा काठ वा लग अप व्यास 11 सेमी प्रयोग गरेर फ्रेम आधारमा राम्रो बनाउन। यसलाई अन्यथा निर्माण को rigidity unsatisfactory हुन सक्छ रूपमा, तल्लो मुकुट फलाम फिटिंग समाधान गर्न सिफारिस गरिएको छ। छैन भवनहरु मात्र सौंदर्य उपस्थिति निर्भर ती किनभने धेरै ध्यान दिएर र सही बाध्यकारी र rafter सिस्टम लागि बोर्डहरू राख्न आवश्यक छ, तर पनि यसको शक्ति। निर्माण hozblok पुष्टि गर्न कि सम्झना - जस्तै एक आवासीय भवन निर्माण रूपमा जिम्मेवार केही तरिकामा प्रक्रिया, त्यसैले सबै चरणमा सबैभन्दा सही गर्न मा यो आवश्यक छ।
पर्खालहरु OSB-प्लेट बनेको गर्न सकिन्छ। को छत प्रकाश crate, wherein वजन भएको छैन सर्वश्रेष्ठ सेट गरिएको छ जो व्यावसायिक वा अन्य फर्श सामाग्री संलग्न। तल्लाहरु पनि निम्न सुरक्षित: यो सामान्य बाक्लो समितिबाट तिनीहरूलाई गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। निस्सन्देह, तपाईंले क्षय र तल्ला को तीव्र विफलता रोक्न भनेर राम्ररी प्रशोधन लग तिनीहरूलाई राख्नु आवश्यक छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, hozblok गर्न आफ्नै हात दिन एकदम वास्तविक हो!
आफ्नो हातले बसाई सराई: चरण निर्देशनहरूको, फोटो द्वारा चरण
PBS को संरचनात्मक एकाइहरु: फाइदा र बेफाइदा, यन्त्र waterproofing
ठोस फर्श मा विस्तार जोडों: प्रविधि, र नियमहरू
Slabs फर्श को आकार। वर्ग, घुम्रेको फुटपाथ: मूल्य
एक काठ घर को पर्खालहरु sheathe भन्दा? सुझाव, फोटो
परिसर को explication के हो र यो किन आवश्यक छ
निकिता जितिस्वि। एक हॉकी खेलाडी जसले अझै पनि उनको नजिकै सबै केहि छ
नेभारा कसरी बढ्न? नेभारा जहाँ बढ्न पत्ता
Cosmetology मा Cocamidopropyl Betaine। के हानि यसलाई स्वास्थ्य गर्न दिन्छ?